Qaabkani Fudud Waxaan ku Sameeyey Dc-Motor Fudud “Learn how”#Homemade Motor | Xaqiiqonews
Qaabkani Fudud Waxaan ku Sameeyey Dc-Motor Fudud “Learn how”#Homemade Motor
Mid ka mid ah kulimadii aan la qaatay saaxibkey cabdirxaman-oo ah wiilkii drone-ka ku sameeyey somalia- waxaan arkay arin si weyn oo ii soo jiidatay oo ah qaab fudud oo uu u sameeyey bilowga Motor-kiisii ugu horeeyey intii uu u guda jiray sameynta motor-ka diyaaradda.
Qaab fudud ayuu isticmaalay si uu u barto sameynta DC motors-ka, isla qaabkaasi ayuuna anigana i baray, waxaana jeceleystay in aan la wadaago tijaabadeyda aqristyaasha sharafta badan ee ku jira heerarka kala duwan ee waxbarashada, gaar ahaan tijaabadani waa howl kaalmo u ah inta daneyneysa cilmiga matoorada, hadii ay ahaan lahaayeen ardayda dhigata maadada Physics ama ardayda kuliyadaha “Electrical Engineering iyo Mechanical Engineering”
ka hor intaan kalin tijaabada waa in aan ogaanaa waa Maxay Dc -Motor?
Dc-motor waa matoor u badala tamarta danabeed mid Dhaqaaq taasi macnaheedu waxa waaye in in qulqulka korontada uu isku badalo walax dhaqaaqaya hadii uu helo xoog birlabeed.
Dunida maanta Dc motors-ka ayaa ah wax sababa in ay dhaqaaqaan baabuurta,waa waxa sababa in ay biibaan diyaaradaha, iyo shaqooyin kale oo dhowr ayaan looga maarmin motor-kaan.
Hadaba qaabkani motorka- ah ma ahan noocyada kuu damaanad qaadaya in aad ku isticmaasho baabuur ama qalab kale,balse waa hab sahlan oo aad ku ogaan karto sida matoorada u shaqeeyaan iyo wax keena wareegga,waxaana ku fududaanaya sameynta Motor adiga kuu gaar ah hadii aad ku guuleysato tijaabadan.
#Waxyaabaha lagaa rabo, si aad u sameyso tijaabada Matorka.
1.cad ama qeyb magnet ah “bir lab”
2.bettery ugu yaraan 1.5 voltage ah aniga waxaan isticmaalayaa Elephent Bettery
3. fiilo maar ugu yaraan 10-m “Copper wire”
4. 2 paper cilps “biinanka warqadaha”
ugu horeyn u sameey biinaanka aad heysato sida sawirka hoose kaga muuqato oo kale
marka xigta bettery-ga aad isticmaaleyso labada dhinac kaga dhiji biinanka aad sameeyeysay sida kaga muuqato sawirka.
hadda duub fiilada maarta aad heysato qaab goobo oo kale adigoo ka soo reebaya laba dhinac ugu yaraan 5 inj waana in natiijada ku soo baxdaa ay u muuqaata sida kaga muuqato sawirka
hadda is dul saar qalabka oo dhan u hoos mari bettery-ga ka dib magnet saar ka dibna fiilo wire labadadeeda daraf kala sur labada ul ee paper clips-ka iska hubi in uu dabka joogo,raac sida sawirka hoose oo kale.
Ma aragtaa Wareeg ka dhashay dabka waxaad heystaa Motor shaqeeynaya ! bommmmmmmmm hadii aad guuleystay Hambalyo !
hadii kale oo aadan arkin wax wareeg ah ama wax shaqo ah fadlan ha walwalin waxaad ku socotaa wadadii guusha hase ahaatee waxaad u baahantahay dul-qaad yar, hadii aad u baahantahay caawin intaasi ka badan fadlan la soco Daawashada muuqaal ku saabsan tijaabadan, oo dhawaan la soo gilin doono fadlan isha na soo mari mar walbo.